Ukusinda kwiRoror's Savage kwi-Shudder's 'Hunted' Trailer - iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Ukusinda kwiRoror's Savage kwi-Shudder's 'Hunted' Trailer
Iindaba ezothusayo zoLonwaboItreyila (imuvi)
Ukusinda kwiRoror's Savage kwi-Shudder's 'Hunted' Trailer
ibhalwe ngu UTrey Hilburn III January 11, 2021
Itreyila Ukuzingelwa ujongeka ekhohlakele. Ijonge ukuba ithathe ibali leHood Red Riding Hood kwaye uyijike indlebe. Kwaye ndinewaka leepesenti apha ngenxa yalonto.
Umlawuli wombono, UVincent Paronnaud uyamnceda lo kwaye uzisa into kufutshane ne-French extremism kwifilimu yesiNgesi. Eyona nto inomdla kukuba le ndoda yayingumdali wefilimu emnandi, IPersepolis.
Isishwankathelo se Ukuzingelwa ihamba ngolu hlobo:
Oko kwaqala njengokudibana ngothando ebharini kujika kube ngumzabalazo wobomi okanye wokufa njengoEva (uLucie Ukulibazisa) iba kukujolisa ekungazini iyelenqe lokucinga gwenxa ngokuchasene naye. Ukunyanzelwa ukuba abaleke njengoko amadoda amabini emsukela ehlathini, utyhalelwa phezulu ngelixa esilwela ukusinda entlango-kodwa ukusinda akwanelanga ku-Eva. Uya kuziphindezela.
Ukuzingelwa Ufumene amanqaku aphezulu aphuma kuJoe Bob Briggs kwiiveki ezimbalwa emva xa wayeqhayisa ngeTwitter ngefilimu awayembayo edlala ngokujikeleza nayo yonke into encinci yeRed Red Riding Hood.
"Ukungcangcazela kushiya eyokuqala ngomhla we-14 uvela eFrance okanye eBelgium okanye eIreland- andinakuxela – ngabalingisi endingazange ndeva ngabo, abanokuthi bachazwe ngcono njenge-Wolf-Creature Stalker Torture Porn, enoluntu lobufazi I-slant kunye ne-subplot yokuphila. Intle.”Utshilo u-Briggs.
Ukuzingelwa iinkwenkwezi Abadlali abaphumelele amabhaso eMagritte uLucie Ukulibazisa (Isivumo) kunye UArieh Ixabiso elifanelekileyo (Intombazana), kunye ICiaran U-O'Brien ujikelezisa eyona nto iphambili
Sazise ukuba ucinga ntoni nge-trailer kwicandelo lamagqabaza.
Ukuzingelwa iza kuShudder ngoJanuwari 14.
UKelly noPablo beza kuBubi abafileyo: Umdlalo! Funda ngakumbi apha.
UkuzingelwaInto yokuqabela encinciShudder
UTrey wakhula etshatile phakathi-kweendlela zevenkile yevidiyo. Emva kocwangco oluphefumlelweyo lwaseCronenberg, uye wadityaniswa ngokusemthethweni kwimidlalo bhanyabhanya nevidiyo. Ubhala zonke izinto zenkcubeko, kwaye ngempazamo wakhaba ookrebe ababini waphila. Mnike ukulandela kwaye umthumelele into engekhoyo kwezomthetho @TreyHilburn.
Ibali le-Creepiest Urban kwiLizwe ngalinye lama-50 kwiCandelo 9
IAmazon's 'Ndiyazi Into Oyenzileyo Ngehlobo Eligqithileyo' Yazisa Ukuphosa